Fox News ma aha dhibaatada, waa ficilka warbaahinta ee Fox News - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY Fox News maahan dhibaatada, waa saxaafada warbaahinta Fox News
War saxaafadeedka Mareykanka ayaa u muuqda mid la yaab leh Fox News iyo milkiilayaasheeda, qoyska Murdoch
Dhawaan, New York Times ayaa sheegtay in ay sharraxayso " Sidee boqortooyadii saameynta ee Rupert Murdoch ay dib u soo ceshatay adduunka . "Waxaa la socday baadhitaan cusub oo New Yorker ah" sameynta Fox News White House ".
Labada qoraa waxay sheeganayaan inay muujinayaan saameynta dhabta ah ee siyaasadeed ee Fox News iyo Patriarch Rupert Murdoch siyaasadda casriga ah.
Labadii maqaalba way farxi lahaayeen Roger Ailes, aasaasaha Fox News . Qoyska Pugnacious waxay jecel yihiin aqoonsi magac Fox News oo sii wadaya in la xaqiijiyo sanado badan oo saxaafadeed kadib dhimashadiisa.
Sida laga soo xigtay Ailes, Fox News marwalba wuu sii ahaanayaa oo waligiisna waxaa laga yaabaa in uu uqalmayo asxaabtiisa ugu weyn. Inkastoo Ailes lagu eryay iyadoo la soo bandhigayo eedeymo la aqbali karo oo ku saabsan weerarka galmada Qormooyinka Fox News ee hadda jira waxay inta badan ka tarjumayaan aragtida asalka ah.
Sida jiilka Oz, Roger Ailes wuxuu sawiray awoodda uu leeyahay awoodda shabakadda. Dhacdooyinkii dhawaa, sida doorashadii Donald Trump, ayaa si cad u xaqiijineysa saameynta shabakadda.
Hase yeeshee, marka aan soo saarno daahirada, caddaynta Fox News iyo Rupert Murdoch, oo abuuray oo joogteynaya xilligeena siyaasadeed ee hadda jira, waxay u muuqataa mid aad u badan.
Fikradda ah in awoodda Fox News ay ka soo baxdo xiriir aan horay u lahayn xukuumadda Trump ayaa sidoo kale soo ifbaxaya.
Chess, ma aha guul
Aan ka bilowno fikradda ah in Trump guushii 2016 loo saari karo Fox News.
Caddaynta noocan oo kale ah waxay noqon kartaa mid aad uqurux badan haddii Rupert Murdoch iyo Roger Ailes ay doonayeen Donald Trump inay noqdaan musharaxa Jamhuuriga ee 2016.
Laakiin iyagu ma aysan samayn. The New York Times iyo lacagta New Yorker aqoonsadaan.
Taas bedelkeed halkii uu ku dhajin lahaa Aqalka Cad, Madadaalada iyo Murdoch ma joojin karaan Jamhuuriyaanka inay codkooda u dhiibaan.
Hase yeeshee awood la'aanta ah inay ku qanciso Jamhuuriyaadka 2016 dhab ahaantii lama yaabin.
Ka fikir warbixinta
In 2008, kan ayaa kor u qaaday musharixiinta kale, laakiin Codbixiyeyaasha Jamhuuriyadda ayaa doortay John McCain . McCain ayaa meesha ka saaray iska-horimaadka, isaga oo ku dhawaaqaya " Reagan Jamacadda. [...]
Sidoo kale, 2012, Mitt Romney ayaa ku guuleystay magaca Xisbiga Jamhuuriga inkastoo uusan helin taageerada maamulka Fox News. Kuwa ka soo horjeeda awoodda wax soo saar ee King Fox waxay u muuqataa inay illowday in Rupert Murdoch ayaa si xoog leh u dhiirrigeliyay Rick Santorum sanadkaas.
Midkoodna Times ama New Yorker ma sharxi karaan guuldarooyinkan. Hase yeeshee, waxay si cad ugu qeexan yihiin qiimaynta awooda saameynta leh ee Fox News.
Dad badan khabiiro sheeganaya "Fox News waa ciyaaryahan aad u muhiim ah siyaasadda Mareykanka ... [taasi] ayaa si firfircoon dib u furtay aragtida dadweynaha Maraykanka" sidoo kale waxay hoos u dhigtay Fox News 'guuldarooyin badan.
Waxaa jira khasaare badan oo lagu qoro maqaalkan, laakiin mid ka mid ah ayaa si gaar ah u muujinaya. Fox News ma uusan u ogolaaneyn inuu helo hal milyan oo doolar sanadkiiba wuxuuna ku qaataa wakhti badan oo hawada ah oo muujinaya muujinta taageerada. Sarah Palin kuma noqon kartid shakhsiyad Jamhuuriyadeed oo la ixtiraamo .
Sarah, guddoomiyihii hore ee Alaska iyo musharaxa madaxweyne ku xigeenka. Palin ee Fox News, 17 June 2013.
Sawirada Fox News
Ugaarsiga oo aan ka tegin madaxa
Suxufiyiinta iyo aqoonyahanka ayaa hoos u dhigay xaqiiqada dadka Fox News. Celcelis ahaan habeenkii 2018, Fox News ayaa soo jiitay 2,4 million daawateyaal ah markii ugu horeysay .
Waa tiro aad u fiican. Waxay ka dhigtay Fox News barnaamijka telefishinka ee ugu-daawashada TV-ga xNUMX.
Laakiin 2018, dadweynaha Mareykanka ahaa ku saabsan 327 million taas oo micnaheedu yahay in 99,3% dadka Maraykanka ah aysan daawan Fox News, haddii ay tahay habeen.
ku saabsan 26% codbixiyayaasha diiwaangashan waa Jamhuuriyaanka diiwaangashan ama waxay isu muujinayaan Jamhuuriyadaha. 2018, waxaa jiray a lagu qiyaaso 158 million codbixiyeyaasha diiwaangashan .
Habeenkii 2018, xitaa inkastoo dhammaan dadka daawadayasha Fox News ay diiwaan gashan yihiin Jamhuuriyeyaash (iyo ma'ahaan), 94,2% Jamhuuriyaadka Mareykanka ee weli ma dhagaysan doonin.
Imisa qof ayaa dhab ahaantii daawanaya Fox News? Barnaamijka warfaafinta ugu qanacsan ee shabakadda baahinta - CBS Evening News - celcelis ahaan in ka badan laba jeer tirada dadka daawadayasha Fox News in 2018.
Iyadoo tirooyinkaas oo kale, maaha wax la yaab leh in Fox News ay inta badan ku faafto ugaadhsiga daawadeeda halkii ay ku noqon lahayd iyaga. Si kale haddii loo dhigo, waxaa suurtagal ah in Fox News ay daryeesho qaybta hore ee hadda jirta ee dhagaystayaasha yar yar, hase yeeshee dhegeystayaasha daacadda ah, halka Fox News ay runtii bedesho qof walba maskaxda.
Taariikhda warbaahinta madaxweynaha
Markaas waxaa jira fikrad ah in awoodda dhabta ah ee Fox News ay ka timaadaa xidhiidhkeeda gaar ahaaneed ee dhowaan la leh maamulka Trump.
Gaar ahaan, magacaabida hore ee Fox News, Bill Shine, Kormeerka Isgaadhsiinta Aqalka Cad - iyadoo weli ay bixiso Fox News - waxay muujineysaa ujeedooyinka isgaadhsiinta isku midka ah iyo wadaaga ah ee u dhexeeya Aqalka Cad iyo silsiladda fiilada.
Hase yeeshee muddo dheer ayaa xiriir dhow la yeeshay shirkadaha warbaahinta iyo Aqalka Cad, oo leh tusaalooyin badan oo ka mid ah noocyada dambe ee kiisaska muuqda kuwaas oo ay dhici karto inay hadda dhacaan.
Tusaale ahaan, sida taariikhyahan uu shaaciyay David Culbert markii Madaxweyne Roosevelt uu doonayay in uu naqdigiisa ugu caansan yahay ee BBC-da oo la yiraahdo Boake Carter - oo laga saaro baasaboorka Maraykanku, wuxuu si fudud u waydiistay sarkaalkiisa saxaafadda inuu u sheego . ] Daryeellaha Carter iyo Shabakada si uu u joojiyo barnaamijka .
Marka la eego xiriirka diiwaangelinta ee u dhexeeya warbaahinta shirkadaha iyo maamulka madaxwaynaha, waxay u badan tahay in maamulku aanu waligiis ka noqonaynin rikoodhka Lyndon Johnson ee rikoodhka.
Johnson ayaa kordhay siyaasadda awood u leh dakhli KTBC raadiyaha uu ku leeyahay Austin, Texas.
Markii uu joogay Baarlamaanka, Johnson wuxuu u dhiibay ruqsadda saldhigga isagoo ka wakiil ah xaaskiisa, halka cadaadiska loo adeegsado CBS si loo helo qandaraas gaar ah . Frank Stanton, oo ah madaxa fulinta CBS oo markii danbe noqday saaxiib nolol dheer leh, ayaa xayiray heshiiskii ganacsiga.
Later, Stanton wuxuu noqonayaa madaxweynaha CBS, marka Johnson uu tago Aqalka Cad, labaduba waxay si joogto ah u kulmaan. Wadahadal diiwaangeliyay 6 February Febraayo 1964 Stanton, Madaxa CBS, Wargelinta Madaxweynaha Johnson ee Kulanka soo socda ee New York Times Editorial Board
"Maxaad u maleyneysaa in musharixiinta Jamhuuriyaadka [for 1964] ay sameynayaan - miyay horumar sameeyaan?" Waydiiso Johnson.
"Uma maleynayo inay horumar ku jiraan," ayuu yiri CBS Madaxwaynaha Maraykanka.
Maamulaha Guud ee CBS Frank Stanton ayaa noqday saaxiib nololeed oo madaxweyne ah Lyndon Johnson.
Waxay u badan tahay in wada hadal la mid ah hadda waxay si joogto ah u socdaan inta u dhaxaysa Madaxweyne Trump iyo dhowr shakhsiyadeed oo Fox News ah.
Hase yeeshee maaddaama noocan ah isgaarsiintu horey u dhacday, lama soo wici karo iyada oo aan horay loo arag. Marka laga reebo heshiiska ganacsiga ee Johnson iyo CBS, ma muuqato in Donald Trump uu leeyahay xiiso toos ah dhaqaale ee Fox News.
Ku qanacsanaanta marin habaabinta
Xusuusnow taariikhda hore ee Fox News 'xidhiidhka dhow ee guriga Aqalka Cad ayaan cudurdaar lahayn. khilaafka dhabta ah ee xiisaha ee saxaafadda silsiladda, sida kaliya ee xoogga saaraya awoodda xadidan ee shabakada macnaheedu ma aha in la oggolaado farriimihiisa.
Si kastaba ha ahaatee, bixinta midba midka kale wuxuu bixinayaa macnaha muhiimka ah ee kuwa doonaya in la yareeyo saameynta silsiladda. Suxufiyiinta iyo aqoonyahanka ayaa ku andacoonaya inay muujinayaan saameynta weyn ee Rupert Murdoch iyo Roger Ailes inay sii wadi karaan awooddan iyada oo aan ogeyn.
Xaqiiqadu waxay tahay in inta badan ee aan ku noolayn "Planet Fox" oo aan ahayn maadooyinka Murdoch ee boqortooyada. New Yorker iyo kuwa New York Times oo naqdiyay ayaa kaliya caawiya Fox News waxay ku kalsoonaan karaan kalsoonida ay la leeyihiin odayaasha - daawadayaasha guryaha iyo Xisbiga Jamhuuriga ee Washington. Dareenka noocan oo kale ah ayaa caddaynaya in Fox News ay sii wadi doonto cabsida ay leedahay.
Roger Ailes waligiis kama cabsan dhaleeceynta saxaafada. Sida jilitaanka Oz, Faa'iidooyinka ayaa aad uga werwersanaa in abuurkiisa uu noqon karo mid daciif ah oo aan waxtar lahayn.
Hase yeeshee tani waxaa lagu soo jeediyey xog badan iyo taariikhda dhow.
Fox News ma joojin karto doorashadii Obama, doorashadii ama mugdi xijaabka ah ee 2018. Inkasta oo kor u qaadista soo noqnoqonta maamulka hadda, aysan muuqan karin u soo guurista tirooyinka ansixinta "si aan caadi ahayn deggan" laga bilaabo Madaxweyne Trump.
Shaki kuma jiro in Fox News ay leedahay saameyn la xaqiijin karo hareeraha siyaasadda. Waxay si aan caqligal ah u dhaleeceynin Jamhuuriyeyaashu inay u codeeyaan Jamhuuriyaanka.
Hase yeeshee, awooda xukunka waxaa lagu tilmaami karaa "marginal".
Falanqaynta A habboon ee saameynta ay Fox News oo ay xoog doorashada ku koobnayn tijaabin doonaa fog ka badan waxyeello ka badan warbaahinta baaritaaneed sii wadaan in ay kor u qaadaan khuraafaadka u gaar ah.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore http://theconversation.com/the-problem-isnt-fox-news-its-the-medias-obsession-with-fox-news-114954
Kiiska Santullo: Gabon oo rafcaan ka dalbaday qareemo qareen - JeuneAfrique.com